नेपाल अधिराज्यकै सवैभन्दा जेठो नागरिक लेब्धु चौधरी, राज्यको सेवाबाट बञ्चित -
नेपाल अधिराज्यकै सवैभन्दा जेठो नागरिक लेब्धु चौधरी, राज्यको सेवाबाट बञ्चित
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ११, २०७६ समय: ८:११:४६
मानिस मरेर पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने त सबैले सुन्नु भएको होला तर जिवितै मानिस पुनर्जन्म भएको भन्दा तपाइँ लाई कतिको विश्वास लाग्छ ? यो कुरा विश्वास गर्न त्यती सजिलो छैन तर वास्तवमा यो यथार्थ हो । १०० वर्ष पार गरिसकेका वृद्ध, जसको कपाल फुलिसकेर फेरी कालो भएको र मुखका ३२ सै दाँत झरिसकेर फेरी नयाँ दाँत पलाउनुलाई पूनर्जन्म नै भएको भन्न सकिन्छ । यस्तै दुर्लभ विशेषता भएको एक मानिस हुन लेब्धु चौधरी ।
सुनसरी जिल्ला, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ (साविक ९) पूर्व टोल डाढी गैंसारमा बसोवास गरिरहेका लेब्धु चौधरी नागरिकताको आधारमा हाल १०२ वर्ष पुगेको देखिन्छ । आफ्ना पिताका ४ श्रीमति मध्ये माइली पट्टिको जेठो छोरा लेब्धु चौधरी, साइली पट्टिको छोरा रामप्रसाद चौधरी, ऊ भन्दा १३ वर्षको कान्छो थियो । उनको भाइ रामप्रसादको वि. सं. २०६७ सालमा मृत्यु हुँदा ९५ वर्षका थिए । यस अनुसार लेब्धु चौधरीको उमेर २०६७ सालमै १०८ वर्षको हुनजान्छ । यो हिसावले हाल उनको उमेर ११७ वर्ष पुग्न जान्छ । ११७ वर्षको उमेरमा पनि उनी तन्दरुस्त अवस्थामा स्वस्थ जिवन विताइरहेका छन । आफ्ना जिवनका अत्यधिक भोगाइहरु विर्सिसकेका चौधरी आफु जन्मेको भूमी, जन्मदिने पिता, युवा अवस्थामा गरेको मज्दुरी, काठमाडौंमा गएर गरेको चाकरी, १९९० सालको महा भूकम्प, तिन वटा विवाह, परिवारहरसँग विताएका केही पलहरु मात्र याद छन् । ४ आमाकी सन्तान उनले पनि ३ वटा विवाह गर्न भ्याएका छन । पहिलो विवाहबाट सन्तान नजन्मिदै श्रीमतिको मृत्यु भए पछि उनले पहाडी केटी सँग विहे गरेका थिए । उनीबाट एक छोरा र एक छोरी जन्मिए पनि छोरा छोरी आफैं सँग लिएर पहाड बस्न थाले पछि एक्लिएको उनी कान्छी श्रीमति सरस्वती चौधरी सँग जिवन बिताइरहेका छन् । नब्बे सालको भुकम्प आउदा आफु जवान भएको बताए । नेपालको पहिलो चुनाव हुनेवेलामा टोली मार्फत नागरिकता बनाएका थिए । त्यतीवेलाको चुनाव चिन्ह त थाहा भएन तर रातो र हरियो रगंको चिनोमा भोट हालेको उनकी श्रीकति सरस्वतीले बताए । उनी पनि ९० सालकी छिन । ९० सालकी भए पनि उनी पनि राम्रैसँग काम गरेर जिवन विताइरहेका छन । गैंसारको ऐलानी जग्गामा बसोवास गरिरहेका उनी खसी बाख्रा, खरायो, हाँस कुखुरा पालेका छन । लेब्धुको सक्कल नागरिकता आगोमा डढेर नष्ट हुँदा नागरिकता विहिन भएका उनी २०३३ साल चैत्र ९ गते नागरिकताको प्रतिलिपी निकालिएको थियो । त्यतीवेला उनको उमेर प्रतिलिपीमा ५९ वर्ष देखाएको छ । जुन उमेर अनुसार उनको उमेर १०२ वर्ष पुगेको हो । १०२ वर्ष उमेर पुग्दा पनि राज्यबाट कुनैकिसिमको सम्मान भने उनले पाउन सकेको छैन । राज्यले १०० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सम्मान गर्छ वा गर्दैन भन्नेकुराको पनि जानकारी नभएको उनलाई स्थानिय निकायमा सरकार आई पुग्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको नजर पुग्न सकेको भने छैन ।
जन प्रतिनिधी त परको कुरा ६ छोरी र १ छोराका माता पिता उनीहरु छोरा छोरीहरुको विहे पछि एक्लो जिवन विताइ रहेका छन् । उनकी श्रीमति सरस्वती भन्छन ‘मलाई विहे भएको ५–७ वर्ष सम्म छोरा छोरी नभएकोले समा चकेवासँग छोरी माँगे “हे समा चकेवा मलाई छोरी नै छोरी देउ म बाँचुञ्जेल तिम्रो नाम लिन्छु, प्रत्येक वर्ष प्रतिमा बनाएर खेलाउछु, तिम्रो पुजा गर्छु” त्यसपछि मैले ५ छोरी पाए पाचौं छोरी पछि फेरी समा चकेवा सेलाउने दिन पोखरीमा दुबै दम्पती डुवेर अब मलाई छोरी बदलेर एउटा छोरा पनि देउ भने पछि १ छोरा अनि १ छोरी हुँदा ७ सन्तान भएको कथा सुनाइन् ।’ छोराको नाम कृष्ण हो । उनको पनि एक छोरा छन उनको नाम प्रदुम्न हो । छोराले क्रिस्चियन केटी सँग विहे गरेकोले घर बस्न नदिएको उनीले भनिन् । जेठी छोरीहरुको भने नाति नातिनीको पनि विहे भइसकेको उन्ले बताइन ।
राष्ट्रिय सम्मानका भागेदार लेब्धु र उनकी पत्नी सरस्वति एकलो जिवन विताइरहदा पनि न राज्यले चाँसो देखाएको छ न नगरपालिकाले न थाकस जस्ता संगठनले चाँसो लिएको छ नत तिनका सन्तानले नै लिन सकेको छ ।